Doctor lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Azoko antoka fa ianao dia hahazo maimaim-poana amin'ny aterineto lalao dokotera, izay olona sy ny biby hizaha dokotera. Samy manana ny olana mba hitsaboana nify, manjaitra ny ratra, dia nitifitra, ary ny olona mila fandidiana. Mazava ho azy, milalao lalao ary mba ho tena dokotera – dia zavatra roa samy hafa, fa na dia ny gameplay sasany dia hanome fahalalana ny amin'ny fatin'i ary inona no hanjo azy, raha ory. Anisan'ny marary misy olo-malaza na koa biby goavam-be ny sasany. Hanampy ilaina dia biby toy ny mpanara izany, ary ny tsy fisian'ny foto-kevitra ao amin'ny sokajy ity tsy manana.
Fomba fitenin'ny Jr Zany Hospital
Lalao fikarakarana nify
Fitsaboana Ellie Back
Andro marary Baby Lily
Dokotera kely dokotera
Fandidiana zaza zazakely Elsa
Pixie kambana fiterahana
Dokotera Super Tongava Super
Zavamaniry zazakely mivoaka
Ratra Ho an'ny zazavavy Anna Bee
Ny ratra amin'ny fanatanjahantena andriambavy sy ny fanarenana
Fitiavana accident Anna
Fitsaboana ny taolana trondro voajanahary
Ice Princess Pregnant Checkup
Vacancines Mermaid Toddler
Famerenana amin'ny laoniny Goldie Home
Ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy matory
Mampihetsika fanavotana mahatsikaiky
Lalao Dokotera tamin'ny Category:
hitondra ny nify
Farany Doctor lalao
Olana amin'ny sofina Baby Cathy Ep20
Fandidiana plastika tarehin'i Levi
Fandidiana tenda mahatsikaiky 2
War Stars Emergency Medical
Baby Cathy Ep16: Marary
Fitsaboana ratra amin'ny zazakely Taylor Ballet
Torohevitra fanampiana voalohany an'i Baby Taylor
Fitsaboana allergy amin'ny lohataona Anna
Dokotera Monster Nail
Lalao Online Rehetra Doctor lalao
rehetra ny dokotera nanome ny Hippocratic fianianana kosa, izay tsy hiteraka fahavoazana, dia hanampy hanary 'ireo izay mijaly noho ny aretina sy ny fanaintainana, mba ho mangoraka.
Virtual Clinic Dokotera Lalao
Ary ianareo no akanjo fotsy, ary dia afaka ny hametraka ny fanandramana eo amin'ny marary. Indray mandeha tany amin'ny hopitaly, dia handray ny marary, izay nilahatra teo amin'ny filaharana. Misy zavatra be loatra tamin'izy ireo, angamba, indray nifoha ny valan'aretina. Eny, na inona na inona, ankehitriny, ary manaiky aretina haingana izay hopitaly, Ary iza sy ny fanofanana dia tsy handratra mba hiverina. Tsy maintsy miasa haingana, toy ny dokotera ao amin'ny toeram-pitsaboana dia kely, ary ny olona avy. Indro, misy ny sasany efa natao tamin'ny farany fofonaina – ny maridrefy ny fahasalamana mampidi-doza nianjera tamin'ny mena marika.
Romance mpitsabo mpiasan'ny
ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy dia olombelona toa ahy sy ianao. Dia miaina fiainana ara-dalàna, ary ny tsy misy olona mandalo azy ireo. Mazava ho azy, manomboka any am-piasana ny olon-tiany tsy soso-kevitra, fa ahoana kosa raha ny fihetseham-po efa latsaka tampoka ny lohany sy ny indrafo? Raha toa ka manapa-kevitra ao amin'ny birao olon-tiany, aza manokatra izany. Te-marary sy ny manam-pahefana nahita koa? Ho tsotra sy varimbariana amin'ny toerana tena nandritra ny fotoana kelikely.
Eritrereto ny fanafody
ianao mandeha any amin'ny laboratoara, izay afaka mamorona ny ny fitsaboana ho an'ny aretina rehetra. Ary raha izany ihany koa ny Fifaliana, dia hanao fandrosoana ianao, ary izao tontolo izao ho latsaka amin'ny tongotrao. Dia araka izany dia afaka mianatra laboratoara ny virosy eo ambanin'ny mikraoskaopy ary hanapa-kevitra inona no karazana aretina. Ny zavamiaina bitika – Ny iray amin'ireo mpitarika fironana ny fitsaboana ary ankehitriny efa nanatevin-daharana azy.
Ny rafitra miasa virtoaly
pilina, tsindrona – izany rehetra izany dia tena tsotra. Eto ny mpandidy – eny, izany no hery! Izy no tena matihanina, ary manampy ny olona indray ny fahasalamany. Te-miasa avy? Ary handray ny lalao mba hanao ny fandidiana.
Ny tanan'ny manomboka zavatra tsotra:
ny fo taova,
Mazava ho azy fa nananihany. Fotsiny – izany mba hitsaboana fractured rantsambatana, manjaitra ny ratra.
Veterinary Fitsaboana – Fitsaboana, koa,
Amin'ny ankapobeny, fandidiana dia tsy ho ketraka ny fo ny, ary raha ianao no dia matahotra ny ra, tsara kokoa Fifaliana bitro, vorona, alika kely sy hamsters. Izy, koa, mila fanampiana ary nahoana no tsy ho tonga veterinarian ka tsy hahasoa ny rahalahy tanora? Izany no manan-kaja ihany koa sy mahaliana.